Semalt - Indlela yokukhupha idilesi ye-IPv6 Kwi-Google Analytics Yedatha Yenkcukacha
Siyazi ukuba i-intanethi inezigidi kwiibhiliyoni zewebhusayithi kwaye ukubala kwabo akunakwenzeka nakubani na kuthi. Xa sidibanisa ikhompyutha yethu, i-laptop okanye ifowuni yeselula kwi-intanethi, isixhobo sethu sinokubonisa idilesi ethile ye-IP esiyinika yona ukungena ngemvume kwi-akhawunti okanye kufaka iiwebhusayithi.
Ihlabathi esihlala kulo linamakheli amaninzi e-IP. Ukususela ngoku, kukho iiligidi ze-IPs, kwaye akukho ndlela yokuphucula nokuphucula umgangatho wazo. Indlela, ebizwa nge-IPv6, inokukwenza ukuba wonke amadoda, abafazi kunye nabantwana bakwazi ukufikelela kwi-intanethi basebenzisa idilesi zabo ze-IP - web based mysql reporting.
U-Oliver King, uMphathi weNtengo kaMthengi we-12 (Semalt , uchaza apha konke okufunekayo ukuqhubeka kule ngempumelelo.
Indlela le nkqubo isebenza ngayo kunye nemvelaphi yayo?
Ngaba wakha wazama ukwazi indlela le nkqubo isebenza ngayo kwaye yintoni imbali yayo? Ukuba awuzange uve nantoni na nge-Intanethi eyabelwe i-Numer Authority (IANA), makhe ndikuxelele ukuba idilesi ethile okanye indawo eyabelwe kuzo zonke iiptops, iipilisi kunye namadivayisi eselula ehlabathini. Le nkqubo isebenzisana nobhaliso lwee-intanethi ezahlukeneyo, ezibizwa ngokuba yi-RIRs. Ihambisa iikhowudi ezithile kwii-IPs ezahlukeneyo kwaye ziyabona ngezo khowudi kamva. Ababoneleli ngeenkonzo ze-intanethi okanye inkampani ohlawula ngayo intlawulo ye-intanethi ukuba inokunika iikhowudi ezithile zokufikelela kwi-intanethi nge-WiFi okanye enye inkqubo efanayo. Kulula ukufikelela nokusebenzisa i-intanethi yamanqaku anikezelwe ngamanethiwekhi usebenzisa uluhlu lwamagama, amanani kunye nabalinganiswa..Bonke aba bantu baziwa njenge-ICANN kwaye bangahlukana ukusuka komnye ukuya kwenye.
Akukho idilesi yakho ye-IPv4 okanye IPv6 kwi-data yakho yeprofayile ye-Google Analytics
Ngaba ufuna ukukhuphela iidilesi ze-IPv6 kwi-Google Analytics yedatha? Apha sinokukunceda ukwenza loo msebenzi ngendlela engcono. Kukho amathuba ukuba wabelwe ikhowudi ethile okanye inombolo. Ungasebenzisa le khowudi okanye inombolo ukufikelela kwiidilesi ze-IPv4 zamasiko. Ngenxa yoko, kufuneka ungene kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics uze ufikelele kwicandelo lolawulo ukulungelelanisa izicwangciso. Ufanele usebenzise inguqu yakutshanje yeGoogle Analytics ukufumana iziphumo ezifunwayo. Kulo candelo, kufuneka ukhethe ipropathi yewebhu okanye iphrofayili ofuna ukuyisebenzisa ifayile. Xa sele sele bakhethwe, isinyathelo esilandelayo kukucofa kwindlela yokucoca ekhethwe ngaphambili kwaye utshintshe amamenyu ahlayo ukuze uthole ulwazi olutsha kunye nokuhlaziywa malunga nale nkqubo yonke. Iifayile kwiakhawunti yakho ye-Google Analytics inokuthatha iintsuku ezimbini ukuya kwethathu ukuze usebenze ngokugcwele, ngoko kufuneka ulungele ukunika ixesha elide ngaphambi kokuba usebenzise lonke.
Idilesi ye-IP yendabuko kunye nedilesi ye-IPv6
Idilesi ye-IP yendabuko ibonakala into efana ne-192.368.255.255, kwaye ibelwe kuwo onke amacebo ekhompyutheni okanye i-laptop kunye neefowuni. Inayo inamba ukusuka kwenye ukuya kwi-255 kwaye ibelwa inombolo engenamkhawulo. I-IPv6 IP ibonakala into efana ne-4,294,367,296 okanye i-2001: d18: 0: 1234: 0: 567: 8: 1. Bobabini baneziganeko zabo, iinketho, iingenelo, kunye nokungalunganga.